FANOHINTOHINANA NY RAHARAHAM-PITSARANA : Namaly bontana ny governemanta ny Sendikàn’ny mpitsara | NewsMada
FANOHINTOHINANA NY RAHARAHAM-PITSARANA : Namaly bontana ny governemanta ny Sendikàn’ny mpitsara
Par Freenews sur 19/05/2017
Mamaly bontana ny sendikàn’ny mpitsara.
Namoaka fanambarana namaly bontana ny fanambarana navoakan’ny teo anivon’ny governemanta ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara, omaly. Fanambarana izay mivantana, nitondran’izy ireo fanazavana mikasika ny finiavan’ny Sendikà amin’ny hampiatra ny tany tan-dalàna eto Madagasikara…
Amin’ny maha fiarahamonim-pirenena ny Sendikàn’ny mpitsara, asan’izy ireo no mamaky bantsilana izay tsy fanarahan-dalàna rehetra sy ny tsy fampiharana ny fombam-pitsarana, hoy ny nanombohan’ny Sendikàn’ny mpitsara ny fanambarana navoakany, omaly. Nitondra fanazavana amin’ny vahoaka ny Sendikàn’ny mpitsara tao anatin’izany fanambarana navoakany izany, izay manazava ny tena andraikitr’izy ireo. “Helohin’ny SMM ny fanohintohinana ny fizotran’ny fitsarana antsakany sy andavany na amin’ireo mpitsara izay manao ny asany… Ny tonia na ny mpitsara miasa eo anivon’ny fampanoavana dia manao ny asany araka ny voalazan’ny lalàna”, hoy ihany ny SMM tamin’ny fanambarana navoakany. Voatsindrom-paingotra koa ny minisitry ny Fitsarana sy ny governemanta, izay tarihin’ny praiminisitra, tamin’ity fanambarana ity. Nolazain’ny SMM fa tokony hanaraka izay lazain’ny lalàna mifehy ny Repoblika izy ireo, ary tsy manana tombontsoa amin’ny fanohintohinana ny raharaham-pitsarana, amin’ny alalan’ny fandrahonana ireo mpitsara manao ny asany.
Mikasika ny raharaha Razaimamonjy
Namaranan’ny Sendikàn’ny mpitsara ny fanambarana navoakany ny mikasika ny raharaha Razaimamonjy Claudine. “Manohina ny sendikan’ny mpitsara eto Madasikara ny fidiran’ny governemanta ao anatin’ny raharaha Razaimamonjy Claudine, nefa izy ireo ihany no nilaza fa tsy raharaham-panjakana io. Ho an’ny SMM, raha tsy raharaham-panjakana io, mahavariana ny fanambarana nataon’ny governemanta izay mandrahona amin’ny tohin’ny raharaham-pitsarana sy amin’ny mpitsara, izay manao ny asany. Mahalala daholo mantsy ny olona fa ny SMM, indrindra indrindra fa ny filohany, no voakasika mivantana tamin’izany”, hoy ihany izy ireo. Raha tsiahivina, nivoaka tamin’ny filankevitry ny governemanta mantsy fa tsy maintsy handray fepetra izy ireo raha toa ka misy mikasa ny hanakorontana. Mbola mafampana, araka izany, ity resaka ity ka andrasana izay ho tohin’ny raharaha, izay mbola mitàna ny sain’ny maro amin’izao fotoana izao.